Hordhac: Chelsea vs Brighton – Lampard Oo Hubkiisa Ugu Culus Tijaabinaya, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey – Cadalol.net
13th September 2020 Cabeeye
Chelsea ayuu xili ciyaareedka cusub ee 2020-21 ugu bilaabmayaa safar ay ugu tegayso Brighton oo ku martigelinaysa garoonka Amex Stadium, waxaanu Frank Lampard dhexda u xidhanayaa sidii uu u muujin lahaa awood ciyaareed iyo guul weyn oo sawir ka bixisa sida maalgelintii weynayd ee xagaagan kooxda lagu sameeyey u shaqaynayso, isla markaana saxeexyada kusoo biiray ay yihiin kuwii ku hoggaamin lahaa inay ku dagaallanto horyaalka Premier League oo ay kaalinta afraad kaga dhamaysatay xili ciyaareedkii hore.
Brighton oo marti loo yahay ayaa iyaduna xili ciyaareedkii hore ku dhamaysatay kaalinta 15aad, laakiin waxay ku jirtay xaalad badqab ah oo aanay ka walaacsanayn inay dib ugu dhacayaan heerka labaad, iyagoo guulo ka gaadhay kooxo waaweyn, taas oo ka caawisay inay warwar la’aan ahaadaan kulamadii ugu dambeeyey ee dhamaadka xili ciyaareedkii hore.
Frank Lampard oo ay u tahay fasal ciyaareedkii labaad ee uu hoggaaminayo Chelsea, waxa uu sannadkii hore la kowsaday naadi mamnuuc ay ka tahay inay ciyaartooyo soo iibsadaan, waxaanu soo urursaday da’yartii amaahda ku maqnayd.
Inkasta oo qaybtii hore ee xili ciyaareedkaas hore ay si fiican u ciyaareen, natiijooyin wanaagsanna ay la yimaaddeen, haddana xilli dambe ayay runta soo taabteen oo ay u babbac-dhigi kari waayeen naadiyadii sida wanaagsan suuqa xagaaga hore uga faa’iidaystay ee ciyaartoyda wanaagsan ku hubaysnaa.
Finalka FA Cup oo ay soo gaadheen oo bishii hore ay Arsenal ka qaadday, Champions League oo wareeggii 16ka ay Bayern Munich ku burburisay, waxa u raacday in kulamadii ugu dambeeyey ay fursad siiyeen Manchester United oo kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League ka riixatay.
Kulanka maanta, waxa indhaha lagu haynayaa saxeexyada cusub ee ay Chelsea samaysay ee ay ka midka yihiin Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyach iyo Thiago Silva oo ay hubaal tahay in qaarkood kusoo bilaaban doonaan.
Dhinaca kale, Brighton ayaa suuqa ka faa’iidaystay, waxaanay Amex ku diyaarsatay saxeexyada cusub ee Joel Veltman iyo Adam Lallana oo ay filayaan inay wax tayo iyo tamarba kusoo kordhin doonaan.
Ciyaarta: Brighton vs Chelsea
Tartanka: Premier League, usbuuca 1aad
Ka sokow inuu horumar ka sameeyey kasoo kabashada dhaawac muruqa ah, Christian Pulisic ayaa la filayaa inuu kaydka u dhici doono oo aanu fursad ka heli doonin kooxda koowaad. Laakiin Mateo Kovacic ayaa gebi ahaanba aan ciyaartan joogin oo ganaax kaga maqan, waxaanay taasi fursad u tahay Jorginho oo khadka dhexe kula soo bilaaban doona N’Golo Kante, halka Mason Mount la filayo inuu booskiisa heli doono.
Thiago Silva ayay u badan tahay in aan lasoo qaddimin oo uu kaydka ku jiro, laakiin waxa go’aanka iska leh Lampard oo saacad ka hor waqtiga ay ciyaartu bilaabmayso shaacin doona safkiisa.